Cadaado oo uu ka bilowday Olalaha doorashada Madaxweynaha Galmudug - Ceelhuur Online
Home > Wararka Galmudug > Cadaado oo uu ka bilowday Olalaha doorashada Madaxweynaha Galmudug
March 18, 2017 admin289
Magaalada Cadaado xarunta kumeelgaarka dowlad goboleedka Galmudug ayaa waxaa todobaadkan ka bilowday olalaha doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug kadib markii xilkaasi baneeyey C/kariin Xuseen Guuleed 26 Bishii hore.
Dadka u ololaynaya Musharixiinta ayaa bilaabay in ay tabeelayaal ay sawirada Musharixiinta iyo erayo doorasho ku xardhan yihiin ka taageen hareera wadooyinka Cadaado, waxaana magaalada ku soo qulqulaya siyaasiyiin iyo qeybaha bulshada.
inka badan 60 xildhibaan ayaa soo gaaray magaalada Cadaado todobaadkan, waxaana xildhibaanadu shirar aan kala joogsi laheyn uga socdaa hoteelada Magaalada, Xildhibaanada oo horey ku kala aragti duwanaa ayaa hadda isku dayaya in ay mideeyaan fikirkooda, si ay u gutaan howsha hortaala ee oo ay ugu weyn tahay doorashada Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug.
Ilaa hadda dhowr musharax ayaa meelo kala duwan uga dhawaaqay in ay u taagan yihiin Madaxtinimada Galmudug, waxaana la filayaa maalmaha soo socda ay siyaasiyiin kale isa soo sharaxaan.
Magaalada Cadaado ayaa tan iyo 2013 marti galisay afar doorasho.
Doorashadii Madaxweynihii Ximan iyo Xeeb Cabdullaahi Baarleex 2013
Doorashada Madaxweynaha Galmudug iyo dhismihii maamulka 2015
Doorashada xildhibaanda Golaha shacabka iyo Aqalka sare Qeybta Galmudug 2016
iyo doorashada hadda lagu dooranayo Madaxweynihii 2-aad Galmudug.
Bulshada Cadaado ayaa u diyaar garoobay marti galinta doorashada Madaxweynaha Galmudug, waxaana waxgaradka Magaalada kulan la qaateen Gudoomiyaha Barlamaanka ahna ku simaha Madaxweynaha Cali Gacal Casir, waxaana hoosta laga xariiqay in la isku diyaariyo martigalinta doorashada.
Dhanka kale xildhibanada Galmudug ayaa la filayaa in ay todobaadkan yeeshaan kulamo rasmi, iyagoo ku dhawaaqaya guddiga doorashada iyo xilliga doorashu dhaceyso.
Madaxweyne Mustafe Cumar oo magacaabay Golihiisa Wasiirada